Dib u soo kabashada Dalxiiska Dominican Been ma tahay? Simpson's Paradox wuxuu eegaa runta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Dominican Republic » Dib u soo kabashada Dalxiiska Dominican Been ma tahay? Simpson's Paradox wuxuu eegaa runta
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dominican Republic • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Saamaynta masiibadu ku yeelatay dalxiiska adduunka oo dhan iyo sababtii dhaqaalaha adduunka aad bay u weynayd. Ku biirinta dalxiiska ee Waxsoosaarka Guud ee Adduunka ee 2020 - $ 4.7 tiriliyan - wuxuu ahaa qiyaastii kala bar sanadkii 2019. Warqad dhowaan soo baxday, agaasimaha guud ee masuulka ka ah Shirka Qaramada Midoobay ee Ganacsiga iyo Horumarinta (UNCTAD) ayaa ku qiyaasey inta ugu badan xaalad wanaagsan, dhammaadka sannadka, waxaan ka hooseyn doonnaa 60% 2019.
Iyada oo dalxiisku uu yahay qayb muhiim u ah dhaqaalaha adduunka, soo kabashada dhammaan waddammada ayaa muhiim ah.
Dhawaan Wasaaradda Dalxiiska ee Dominican waxay soo bandhigtay xog tilmaamaysa in qaybta ay leedahay soo kabasho cajiib ah.
In kasta oo xogtu sax tahay, fasiraadda ayaa laga yaabaa inay ka tagto hal su’aal oo tilmaamaysa soo kabashadaas.
Soo -kabashadu waa himilada dhammaan waddamada, maadaama dalxiisku uu yahay qayb muhiim u ah dhaqaalaha adduunka, laakiin gaar ahaan kuwa haysta dalxiiska oo ah qayb muhiim u ah dhaqaalaha.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Wasaaradda Dalxiiska Dominican waxay soo bandhigtay xog cadaynaysa soo kabashada runta ah oo layaabka leh ee dalxiiska Dominican soo gala. Xogtu waa sax, laakiin fasiraaddoodu waxay u baahan tahay falanqayn gelinaysa nalalka caddaynta iyo hooska soo -kabashadan, oo ku salaysan xogta caalamiga ah ee soo ururisa xogta qayb ahaan sifooyin kala duwan.
Muddo konton sano ah, saamayn ayaa la baaray taas oo xaqiiqdii la ogaaday in ka badan qarni ka hor, isbarbaryaaca Simpson. Gabagabadii dhalanteed waxaa laga yaabaa in la gaaro marka tirakoobyadu isku daraan xog aan isku mid ahayn. Annaga oo aan gelin faahfaahinta aragtida xisaabeedkan, waxaan ilaalinnaa inay u oggolaanayso inay fahmaan xadka qaar ka mid ah fasiraadda xogta ee Wasaaradda Dalxiiska ee Dominican, xogta, runnimadeeda, waxaan ku celcelineynaa si looga fogaado is -maandhaafka, la isma weydiiyo.
Muhiimada fahamka xadkaan uma baahna wax qiil ah dal halkaas oo, 2019, iyada oo loo marayo dakhliga sarifka lacagaha qalaad, dalxiisku uu ku deeqay 8.4% GDP, taasoo ka dhigan 36.4% dhoofinta badeecadaha iyo adeegyada. Intaa waxaa dheer, dalxiiska, in kasta oo 13% foorarsasho ah marka la barbar dhigo 2018, uu ku deeqay 2019 ku dhawaad ​​30% Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda.
Sababahan dartood, si taxaddar leh u xaqiijin bayaankii in ee Jamhuuriyadda Dominican, waaxda dalxiiska ayaa ka tagaysa dhibaatada ay sababtay masiibada COVID-19 waxay aasaas u tahay siyaasadaha guud ee dalka, iyo sidoo kale inay hagto go'aannada dhaqaale-yari ee hawlwadeennada waaxda.
Aan xusuusanno xogta ugu weyn ee ay Wasaaraddu soo xigatay:
-Dadka aan deganayn ee diyaarad ku yimid, bishii Ogosto ee sannadkan, waxay matalaan 96% kuwa sannadka 2019, waana isbeddel ka badan inta la xaqiijiyay wixii dhacay qeybtii hore ee Sebtembar.
- Isbeddelkan waxaa lagu xaqiijiyay falanqaynta billaha ah ee soo kabashada tilmaamahan tan iyo soo kabashada. marka la barbardhigo 2019, wuu sii kordhayay, laga bilaabo 34% Janaayo-Febraayo, illaa 50% Maarso-Abriil, illaa ku dhawaad ​​80% May-June iyo 95% July-Ogosto.
-Imaatinka dadka aan u dhalan Dominican-ka ayaa si joogto ah u korayay muddo toban bilood ah.
- Boqolkiiba dalxiisayaasha hoteellada deggan waa 73%.
Kuwani dhammaantood waa xog run ah oo diiwaangashan. Si kastaba ha ahaatee, Simpson wuxuu na xusuusinayaa inay tixraacayaan shaybaarro isku daraya kooxo kala duwan iyo xilliyo kala duwan.
Falanqaynta guud ee muddadu waxay noqon doontaa mid sax ah haddii ay jiri lahayd xasillooni soo -galayaasha heerka bil kasta muddada loo doortay isbarbardhigga. Arrintu sidaas ma ahayn, bilaha 2019na uma dhigmaan isbarbar dhigga 2021. Sannadkaas, hawlwadeennada dalxiisku waxay si gacan -ku -taabasho leh u saameeyeen geerida qaar ka mid ah dalxiisayaashii intii u dhexaysay May iyo Juun, taas oo beddeshay koboca dalxiiska Waqooyiga Ameerika ee la duubay qeybtii hore ee sanadka (ku dhawaad ​​10%) oo hoos u dhacday 3% tobankii bilood ee hore (4% haddii wadarta guud ee dadka ajnabiga ah la tixgeliyo).
Tani waxay u baahan tahay in la kala sooco inta ay le'eg tahay 96% bishii Ogosto ama in ka badan 110% labadii toddobaad ee ugu horreeyay bishaan waxaa sabab u ah soo -kabashada tirooyinka (imaanshaha 2021) iyo inta hoos u dhac ku yimid tirada (imaanshaha 2019).
Saameyntani waxay miisaameysaa gaar ahaan haddii imaanshaha la jebiyo iyadoo lagu saleynayo cunsuriyad kale, oo lagu kala soocayo kuwa aan Dominican-ka ahayn ee deggan iyo kuwa ajnabiga ah.
Waxaan ku samaynaa miiska soo socda halkaan aan ku soo bandhigeyno tan xogta, bilaha Janaayo-Ogosto, laga bilaabo 2013.
Xogtan, iyadoon shaki la gelin isbarbar-dhigga Wasaaradda ee bishii Ogosto, ayaa dib-u-cabbir ku samaysay, iyada oo la eegayo in muddada siddeedda bilood ah, wadarta dadka imanaya ay 60% yihiin kuwa 2019 waana inaan dib ugu noqonnaa 2013 si aan u helno tiro hoose . Isbarbar -dhiggan u dambeeya wuxuu tilmaamayaa xogta guud, laakiin haddii aan fiiro gaar ah siin lahayn kuwa ajnabiga ah oo keliya, tani waxay bixin doontaa 53%, marka la barbar dhigo 2019, iyo 72%, marka la barbar dhigo 2013.
Tixgelinta dadka ajnabiga ah ee aan deganayn waa muhiim sababtoo ah dadka u dhashay Dominican ee aan deganayn waxay u badan tahay inay yareeyaan isticmaalka adeegyada dheeraadka ah sida hoteellada, makhaayadaha, gaadiidka. Kormeerkan oo aan aad u sasabayn waxaa taageeraya deggenaanshaha hoteelka, kaas oo, inkasta oo ay yihiin ajaanib 86% kuwa la oggolaaday, ay ka yar yihiin qaddarkan, halka taariikh ahaan labada boqolle ay ahaan jireen isku mid.
Waxaa jira xog kale oo aan isku mid ahayn oo la xiriirta dalxiiska gudaha ah oo ay tahay in laga walwalo. Xogtan, oo lagu soo bandhigay jadwalka soo socda, waxaa loola jeedaa burburka dadka imanaya ee ku yimid gobolkii ay ka yimaadeen dadka aan deganayn.
Year Waqooyiga Ameerika Europe South America Central America
Xogta ugu habboon ee milicsigayaga ayaa ah koritaanka dalxiiska Waqooyiga Ameerika oo ay weheliso hoos -u -dhaca ka yimid Yurub. Haddii xogtan la wada tixgeliyo tan la xiriirta dhalashada, oo saamaynteeda dadban aan ka faalloonnay, waxay umuuqataa in saamaynta taban ee hoos u dhaca dalxiiska Yurub si dhib yar loogu magdhabi karo kororka dalxiiska Waqooyiga Ameerika.
Saadaashan waxaa kaloo taageeray xogta reer Yurub ee ku saabsan soo kabashada taraafikada hawada Yurub. Isbarbar -dhigga xagaagan iyo sanadihii hore wuxuu muujinayaa in 40% oo keliya taraafikada 2019 la soo kabsaday, iyadoo la hagaajiyay marka la barbar dhigo 2020, markii soo -kabashadu ay ahayd 27%. Waana in lagu daraa in taraafikada hawadu aysan ahayn tilmaame isku mid ah, maadaama Yurub gudaheeda uu ka soo kabsaday taraafikada ay tahay inay aad u xiiseeyaan inta badan Jamhuuriyadda Dominican, oo ah duullimaadyada qaaradaha ka dhexeeya. Dhab ahaantii, kuwa inta badan soo kabsaday waxay ahaayeen duulimaadyo jaban oo Yurub dhexdeeda ah. Maanta, waxay matalaan 71.4% wadarta guud, halka laba sano ka hor ay matalayeen 57.1% oo kaliya, mana aha in la iska indhatiro in meelaha aad wax ugu biiriya natiijadan, si uun, ay u matalaan beddelka dalabka dalxiiska ee Kariibiyaanka.
Midkan waa inuu ku daraa in tallaabooyinka Green Pass -ka Yurub aysan u xaglin dalxiiska Yurub sidoo kale sababta oo ah tallaalka inta badan laga isticmaalo Jamhuuriyadda Dominican, Sinovac ma oggola in la helo Kaarka Cagaaran. Tani waxay noqon kartaa su'aal, laakiin runtii waxay saamaynaysaa waaxda wakaaladda socdaalka, sidaa darteed sawirka ka dhashay ayaa ah inay weli jirto waddo dheer oo la aadi karo ka hor inta dalxiiska Dominican uusan ku laaban heerkiisii ​​hore ee masiibada.
In lagu xisaabtamo soo kabsashada xaaladdii ka horraysay masiibada ee ka dhalatay xakamaynta masiibada ayaa laga yaabaa inay tahay yididiilo, si kastaba ha ahaatee, uma muuqato inay dhici karto muddada gaaban.
Tani waxay ka dhigan tahay, iyada oo aan ahmiyad weyn la siin hagaajinta dhowr dhibcood tobanle ee boqolleydan, waxaa lagama maarmaan ah in laga fekero siyaasadaha dib-u-dhaqaajinta ee la fiirinayo badhtamaha muddada 2023-ka.
Warbixin dhowaan ay soo saartay Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka ayaa u doodeysa tallaabooyinka firfircoon ee dowladaha, sida maalgelinta iyo soo jiidashada maalgashiga qaybta gaarka loo leeyahay ee kaabayaasha jirka iyo dhijitaalka iyo kor u qaadista qaybaha safarka ee gaarka ah, sida dalxiiska caafimaadka ama dalxiiska MICE. Tani waxay tusinaysaa siyaasad caalami ah, oo aan ahayn waaxyo oo sidoo kale ku lug leh qaybaha kale ee bulshada.
Tixgelinno kuwan la mid ah ayaa waxaa sameeyay laba bilood ka hor agaasimaha guud ee masuulka ka ah UNCTAD, isaga oo ku adkeystay baahida loo qabo in dib looga fikiro qaabka horumarinta dalxiiska, kor loo qaado dalxiiska qaranka iyo miyiga, iyo in la qoro.
Kaabayaasha hadda jira ee dalka ayaa oggolaanaya tallaabooyinkan, tanina waxay u baahan tahay siyaasad dhiirrigelin oo xoog leh, oo lala kaashanayo waaxda gaarka loo leeyahay, iyada oo aan lagu qancin xaqiiqda ah in soo kabsasho gaar ah ay dhacayso. Xaqiiqda ah in dhammaadka sannadkan ay yimaadeen 4.5 milyan ama 5 milyan oo qof, oo weli aad u yar marka la barbar dhigo sanadihii hore, wax weyn kama beddeli doonto, haddii aan loo abuurin shuruudo dib -u -hawlgelinta xoogga ee qaybta, taas oo dalka u oggolaan doonta joogteeyaan jagada hoggaamineed ee dalxiiska Kariibiyaanka.